ExTiX 20.2 inosvika yakavakirwa paUbuntu 20.04 iyo isiri kana mubeta | Linux Vakapindwa muropa
Exton inozviitazve: ExTiX 20.2 inosvika yakavakirwa paUbuntu 20.04 iyo isina kana kusvika beta
Ingangove isiri yekutanga kana yekupedzisira nguva yatinotaura kuti haisi nguva yekutanga kana kuzove yekupedzisira kuti uverenge nhau dzakadai. Uye ndezvekuti, mumaonero angu, kana Arne Exton ane mukurumbira nechimwe chinhu, ndechekuita zvinhu, ngatitii, kuva neushingi kana kungoita pamberi penguva. Izvi ndizvo zvaakaita zvakare: kupera kwaNdira yakakanda ExTiX 20.2, yazvino vhezheni yezvaanodaidza kuti "iyo yekupedzisira inoshanda system." Uye zvakare yakazviita zvichibva pane yekushandisa system iyo isati yasvika yayo yakagadzikana vhezheni.
Muchokwadi, ExTiX 20.2 yakavakirwa pane inoshanda system iyo isati yasvika kune yayo beta vhezheni. Tiri kutaura nezvazvo Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, Canonical's vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu iyo ichaburitswa muna Kubvumbi 23, 2020. Naizvozvo, ExTiX 20.2 yakavakirwa paUbuntu Mazuva ese Anovaka. Iyo yambotaurwa beta inosvika pakati paKurume. Pazasi iwe une runyorwa rweakatanhamara matsva ayo asvika neichi chazvino chiverengero che "Definitive Operating System".
ExTiX 20.2 Pfungwa Huru
ExTiX 20.2, inova iyo vhezheni inoitika kune ExTiX 19.10, inouya nenhau idzi.
Linux 5.5.0-rc7-exton, inova vhezheni yekudyara yeazvino Linux 5.5 Regedza Mukwikwidzi.
Plasma graphical nharaunda.
Google Chrome yakabviswa kuti ichengetedze Firefox.
Mapakeji nyowani, akadai seGParted, Brasero, uye GCC.
Mamwe mapakeji senge Refracta Snapshot akagadziridzwa.
Squid semugadziri, iyo inotsiva Ubiquity.
NVIDIA 440.44 madhiraivha, akacherechedzwa Linux 5.5, akaisirwa default.
Speed ​​yakakwidziridzwa pamakomputa ane angangoita 4GB ye RAM.
Vashandisi vanofarira kushandisa ExTiX 20.2, kunyangwe tichirangarira kuti yakavakirwa pasoftware iyo ichiri nemwedzi miviri kubva payakatangwa, inogona kurodha pasi mufananidzo wayo we ISO kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Exton inozviitazve: ExTiX 20.2 inosvika yakavakirwa paUbuntu 20.04 iyo isina kana kusvika beta
Muchinda uyu anopoperwa, ini handiise distro kubva kwaari kana kupenga, ndinofunga angaputika komputa, hahaha
Chaizvoizvo shanduro dzekuvandudza dzeUbuntu dzakanaka. Ini ndinowanzo shandisa seyakagadzikana mwedzi miviri mushure mekuvandudza Kana ivo vachikwenya kumusoro kungave vhiki pamberi kana kuvhura zuva
Charlis martinez akadaro
Kuti distro yakavakirwa paCR haisi fanano inofanirwa yekusagadzikana kana kusakura. Dzimwe nguva kunyange alpha distros inosunungurwa zvichibva pane yakagadzikana distros. Asi kunyanya, iyo nyaya yekumisikidza RC-based distro inowanzoitirwa kune chimwe chakakosha chinodiwa. Zvakaitika kwandiri kuti Systemback yakamira kushanda nemazvo paDebian Buster yakagadzikana (uye zvese zvakadzokororwa) uye zvakadaro ichiri kushanda sedumwa… paRC1. Saka, ini ndaifanira kuseta kugovera kwandinogadzira pane iyo, zvirinani kwenguva pfupi (pamwe iyo Systemback mugadziri akaigadziridza). Aya ndiwo mabudiro achaita Quirinux vhezheni 2.0 ( http://www.quirinux.org ) kunyangwe hazvo ramangwana chinangwa chiri chekuvakira paDevuan Beowulf (mukuvandudza).
Paunoita chimwe chinhu seichi, chinoratidzika kunge chine njodzi, chokwadi ndechekuti izvo zvaunofanirwa kuita kugadzirisa matambudziko anogona kukanganisa vashandisi vaunofungidzira kuti ndiyo ichave iyo yakawanda yako distro. Tiri kutaura nezve madiki madhizaina, akagadzirirwa chaiwo mapoka evashandisi. Nguva zhinji zvikanganiso izvo RC inogona kuve nazvo hazvikanganise mhando yevashandisi vauri kuzoigovanisa uye kune rimwe divi distro yakavakirwa pane imwe inenge nguva dzose inosanganisira kusanganiswa kwemabhuku akaedzwa kuti vagarisane, shanduro kunze kwenzvimbo yedistro.
Pindura kuna Charlis Martinez
Enrique Santamarta akadaro
Ndakagadzirisa kusvika 20.2 uye ndarasa ruzha rwese, maspika uye mic, pane chero munhu anoziva kuimisazve?
Pindura kuna enrique santamarta
Mwedzi mumwe neEdge. Izvo Linux inogona kudzidza kubva kuMicrosoft browser nyowani